Ibraahin Yuusuf Ahmed ‘Hawd’ | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Aanadii Negeeye – Qeybtii 29aad Waa shantii galabnimo, qorraxduna waa ay qabowday oo dharkii caddaa ee maanta mid ka qurux badan oo dahab u eg ayay gashatay. dayrka dhagaxa ah ee dhinac ka qabyada ah, ee ganjeelada buluugga iyo caddaanka ah leh, waxaa ku dhex yaal laba qol oo keliya oo isu furan albaabkooduna yahay loox cagaaran. Dhulka deryka iyo labada qol u dhexeeyaa waa ciid, waxaana ka baxay doog khafiif ah oo gogol la moodo. Doogga waxaa ka sii qoyan hogol duhurkii magaalada martay, waxaana dhan ka mayracanaya laba qoolley, dhanka kalena waxaa dermo ku fadhida gabadh ilmo nuujinaysa. …
Aanadii Negeeye – Qeybtii 28aad Raxmo waxay ugu dambaysay gabdho badan oo adeegto ka soo noqday Filla Adduun, kuwaas oo ay mid waliba maalmo yar gudahood shaqada ka carartay. Dhammaan waxay ka argaggaxeen xayodarrada meesha ka socota, iyo isla markaas ragga aan xishoodka aqoon ee Negeeye ugu horreeyo, kuwaas oo inta ay kijada ugu galaan kor iyo hoos meesha ay gacantoodu gaadhi kartaba gaadhsiiya, wax aanay u soo shaqo teginna ka qalqaashada. La ma tirin karo inta gabdhood ee sababtaas shaqada kaga tagtay. Laakiin Raxmo waa ay ugu miskiinsanayd ama ugu dulqaad badnayd. Da’deedu waxay ahayd toddoba iyo toban jir, …
Aanadii Negeeye – Qeybtii 27aad Sidii Raage loo afduubay Deeqa waxay u ahayd oohin iyo welwel. La ma ka la ogayn in uu dhintay iyo in uu nool yahay, waxaa se la hubay in uu cadaw arxandaran gacanta u galay. Waxay eersatay Diiriye iyo ruwaayaddii jaan ee uu ku qalqaaliyay. Waxay eersatay waraaqihii sheyddaan ee Rooble ee guriga laga helay. Waxay eersatay wax kasta oo sabab u noqon karey in Raage la qabto. Taa waxaa ugu darsamay xanuun dumar oo beryahaa dhinaca u dhigay oontiina ka jaray. Iyada, Leyla, ehelkii iyo asxaabtii kaleba wax walba waa ay sameeyeen cid kastana …
Aanadii Negeeye – Qeybtii 26aad Raage labadii qol ee cusbaa ayuu si kharash yar ugu aqalgalay. Aroosku wuxuu ahaa isla maalmihii ay Leyli dhaawaca la soo noqotay. Waxay aad u jeclayd in ay arooska ina adeerkeed minxiisad ka noqoto, sidii ay iyaga oo yaryar ku ballameen, laakiin weli wejiga waa ay ka dhaawacnayd, waxayna isu xilsaartay hawlaha kale in ay wax ka maamusho. Gurigeedii, ama gurigii Negeeye, sidii ay uga soo alaab qaadatay dib u ma ay ag marin oo waxay joogtay guriga Raage. Markiiba Raage qol kale oo aan guriga ka fogayn ayuu labaataneeyo kursi iyo dhawr miis oo …
Aanadii Negeeye – Qeybtii 25aad Maalmihii uu arooska isu diyaarinayay ayuu Raage mar uun ina adeertii Leyla waayay. Wuu ogaa in ay noqonayso hormuudka hawsha arooska, laakiin in aanu dhawr cisho oo isku xiga arag sababteeda ma uu fahmin. “Waxaan u malaynayaa in aan socdaal Burco ah ka maqlay”, ayay Deeqi Raage ku tidhi. “Ma socdaal sidaas kediso u ah? Ma Negeeye ayay wax ku dhaceen?” “Fili maayo, waxa ay se hadalhaysay arrin ay doonaysay in ay Negeeye degdeg uga la hadasho.” “Laakiin maxaa iyada oo aan cid sagootiyin subax keliya dhaqaajiyay?” Wayddiintaa ayuu ku soo celceliyay isaga oo maleeyay …
Aanadii Negeeye – Qeybtii 24aad Dhallinyarada soomaalida ee reer magaalka ah malaha ma jirto dunida dhallinyaro ka badowsani. Boqollaal kun oo magaalo ku wada dhaqan, dan joogto ahna wadaaga ama wadaagi kara, ayaa raba isbarashadooda iyo xidhiidhkooda oo dhan in ay hayb qabiil u maraan. Waxaa la isku qalday oo la ka la saari kari waayay dhaqan iyo hidde – dhaqan in uu yahay hannaan ay waqti la joogo bulsho u nooshahay, halka uu hidde yahay dhaqan mar hore lagu soo noolaa. Haddii marxalad nololeed lagu dhagaxoobo, laguna dhiirran waayo geeddiga xiga, waxaa abuurma dhaqan silloon oo casriga la joogo …
Aanadii Negeeye – Qeybtii 23aad Rooble bil ka hor ayuu isaga oo wefdi hoggaaminaya u dhoofay dalka Ingiriiska si uu uga qaybgalo aqoon isweydaarsi caalami ah oo ku saabsan wax ka qabashada akhris- iyo qoris la’aanta dunida sookoraysa. Laakiin wefdigii dalka wuxuu ku soo laabtay iyada oo aan Rooble iyo afadiisii la socon. Intaasna Leyla iyo Raage la ma ay soo hadlin. Dabadeed maalin ayuu Raage sanduuq ay isaga iyo reerku Boosta Dhexe ku wada lahaayeen soo furay, kaas oo khamiis walba la soo furi jiray. Wuxuu ugu tegay laba warqadood oo isaga iyo Leyla ku ka la socda. Isaga …
Aanadii Negeeye – Qeybtii 22aad Beryahaa Soomaaliya waxaa gilgilayay saddex dabaylood oo awoodda burburinta ka la daran. Mid aad u hanfi badani waxay ka soo afuufmaysay xeebta koonfureed ee dalka. Mid kale oo dhaxan badani waxay ka soo dhacaysay buuralayda Itoobbiya. Ta saddexaad oo bacaad kulul wadatay waxay ka imanaysay Lamadegaanka Carabta. Tan u dambaysa ayaa dad uu Sheekh Xasan ka mid yahay sidatay. Wahaabiya waa mad’hab ka mid ah mad’habaha islaamka kuna abtirsata nin sacuudi ah oo magaciisu ahaa Maxamed ibn Cabdulwahaab. Ninkaasi diinta ka ma uu bixin fasiraad lagu tilmaami karo mad’hab, sidii ay sameeyeen imaamyadii hore ee …
Aanadii Negeeye – Qeybtii 21aad Goor casargaab ah isaga oo Raage bixid isu diyaarinaya ayaa albaabkiisa la garaacay. “Iyaa! Waar nimankani ma Carraale iyo Aadan baa?” “Salaamu calaykum!” ayay ku bariidiyeen. “Wa calaykuma salaam!” Waa ina Sheekh Xasan iyo Carraale oo labaduba ardaydiisa ah. “Haye macallin, nabad sow ma aha?” “Waar waa nabade, maanta waad soo dheeraateene.” “Haa, waannu soo dheeraannay, weliba guriga waanu soo garan weynay oo cabbaar baanu warwareegnay.” “Denbiga idinka ayaa leh, haddii aad imanaysaan waxay ahayd in aad iga soo tilmaan qaadataan. Waxba se ma aha mar haddii aad timaaddeen. Dhabcaal baan ahay oo marti badan …
Aanadii Negeeye – Qeybtii 20aad Negeeye markii Leyla la siiyay toddobaad keliya ayuu fasax haystay, dhakhso ayuuna u noqday si uu soo qaato waqti uu hawlihiisa ku dhammaysan karo. Sidaas ayuu ku tegay oo haddana bil in ka yar isa soo rogay. Isaga oo boorso samsanayd ah sita ayuu reer abtigii, oo imika reer soddogna u ah, booqasho ugu tegay. Fadhiga ayaa shaah lagu wada cabbay, dabadeed sidii caadada u ahayd Qarad iyo Leyli si ay labada nin u sheekaystaan ayay si dhuuban uga siibteen. Markii ay isu keliyaysteen ayuu Negeeye boorsadii uu sitay odayga u taagay isaga oo leh: …